‘गुणस्तरीय उपचारका लागि प्याथोलोजीलाई मेरुदण्ड मानिन्छ’ – Ishan Hospital
‘गुणस्तरीय उपचारका लागि प्याथोलोजीलाई मेरुदण्ड मानिन्छ’
प्याथोलोजी भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा दिनका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधा हो, जसमा बिरामीलाई प्रमाणसहितको उपचार प्रदान गरिन्छ। कुनै पनि रोग लाग्यो भनेर मात्र हुँदैन। त्योे प्रमाणित हुनुपर्छ। प्रमाणित गर्ने काम ल्याबमा हुन्छ।
कुनै पनि रोग लागेपछि त्यसको उपचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै सही निदान हुनु हो। यदि सही निदान भएको छ भने मात्र त्यसको उपचार सही दिशामा गएको मानिन्छ। बिरामी बिस्तारै निको हुँदै जान्छ। जस्तै कुनै बिरामीलाई क्यान्सर भयो भनेर मात्र हुँदैन त्यो कुन क्यान्सर हो, कुन स्टेजमा छ, निको हुने सम्भावना छ कि छैन, सबै जानकारी हुन जरुरी हुन्छ। यो सबै रिपोर्ट ल्याब टेस्ट गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ।
प्याथोलोजीमा बिरामीको ल्याब टेस्ट हुन्छ। यसले रोगको प्रमाणित गर्ने मात्र होइन निगरानी समेत गर्छ। उपचारले निको भइरहेको छ छैन भने पनि यही टेस्ट गरेपछि पत्ता लाग्छ। त्यसैले गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचारका लागि प्याथोलोजीलाई मेरुदण्ड मानिन्छ। यो नभएसम्म उपचार सेवा अपूरो हुन्छ।
साधारण भाषामा भन्नुपर्दा हामी बिरामी भएपछि डाक्टरकोमा जान्छौँ। डाक्टरलाई आफ्ना समस्या भन्छौँ। लक्षणका आधारमा डाक्टरले कुनै रोग हुनसक्ने भन्दै सो प्रमाणित गर्नका लागि ल्याबमा केही टेस्ट गर्न लगाउँछन्। साधारणतया ल्याबको रिपोर्ट नआएसम्म खासै कुनै उपचार चलाइँदैन। त्यसैले पनि उपचार सेवामा धेरै चर्चा नहुने भए पनि यो सेवा असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जब ल्याबबाट रिपोर्ट आउँछ त्यहीअनुसार मात्र के उपचार गर्ने भन्ने निर्णय डाक्टरले गर्छन्।
आजभोलि भने सर्वसाधारण स्वास्थ्यप्रति केही सचेत हुन थालेका छन्। जसले गर्दा उनीहरू सिधै ल्याबमा आएर ‘मेरो थाइराइड टेस्ट गर्नुपर्यो’ वा ‘सुगर लेबल चेक गर्नुपर्यो’ भन्छन्। यसका लागि डाक्टरले नै टेस्ट गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो रोग लाग्नुअगावै सचेत भएको हो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। तर धेरैजसो भने डाक्टरले नै ‘यो यो टेस्ट गर्ने’ भनेर लेखेर पठाएपछि नै टेस्ट गरिन्छ।
आजभोलि गल्ली गल्लीमा ल्याब सेन्टर खोलिएका छन्। ती सेन्टरको विश्वसनीयताको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। जहिले पनि गुणस्तरीय ल्याब सेन्टरमा मात्र जाँच गराउनुपर्छ। रोगको सम्पूर्ण उपचार यसमै निर्भर हुने भएकाले सही ल्याब छनोट गर्नुपर्छ। सरकारले क, ख, ग भनेर स्टयाण्डर्ड नै छुट्याएको छ।
ल्याबमा काम गर्ने जनशक्ति उपकरण, समय वातावारण र बिरामीको मानसिकता धेरै कुराले रिपोर्टमा असर गर्नसक्छ। सकेसम्म आईएसओ प्राप्त ल्याबमा टेस्ट गर्दा नतिजा भरपर्दो आउँछ। यस्ता ल्याबले ‘स्टाण्डर्ड मेन्टेन’ गरेका हुन्छन्। यसका साथै ल्याबमा काम गर्ने जनशक्तिले पनि बिरामीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिएर उनीहरूको टेस्ट गर्दा रोग पहिचानमा मद्दत पुग्छ।
कहिलेकाहीँ ल्याबैपिच्छे बिरामीको रिपोर्ट फरक फरक रिपोर्ट आउने कुराको प्रसंग पनि आउने गर्छ। रिपोर्ट फरक आउनुमा धेरै कुराले निर्धारण गरेकाे हुन्छ। यो कुरा हामीले बिरामीलाई बुझाउन जरुरी हुन्छ। सानासाना कुराले पनि रिपोर्टमा फरक पर्न सक्छ। बिजुलीको भोल्टेज कम भयो भने पनि रिपोर्ट फरक पर्नसक्छ।
कुन स्ट्याण्डर्डको ल्याब हो, कस्ता जनशक्ति छन्, त्यसमा प्रयोग हुने ‘रिएजेन्ट’ कस्तो छ लगायत कुराले रिपोर्ट फरक पर्छ। त्यसैले मैले टेस्ट गरेँ भनेर ढुक्क हुनुअघि म सही ल्याबमा आइपुगेँ कि पुगिनँ भन्ने विचार पुर्याउन आवश्यक छ। नेपालमा पनि धमाधम स्ट्याण्डर्ड ल्याब सेन्टरहरू खुलिरहेका छन्। यसरी सुविधासम्पन्न ल्याब खुल्नु भनेको प्रमाणसहितको उपचार सेवामा टेवा पुग्नु हो।
कोरोनाकाे तेस्राे लहरमा बालबालिका किन बढी जोखिममा ?
काठमाडौं । कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर बालबालिकाका लागि बढी घातक हुने चर्चा भइरहेको छ । सरकारले संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि सबै अस्पतालहरुलाई २० प्रतिशत बेड
We have restarted ABG services at Ishan Children and Women's hospital.
Pediatric Covid Service
We have started Pediatric Covid HDU service at Ishan Children and Women's Hospital Pvt Ltd
कोरोनाबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ? यस्तो छ डा आरपी चौधरीको सुझाव
प्राडा आरपी चौधरी पछिल्लो समय बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको महामारी उच्च रहेको पाइएको छ । यसभन्दा अघि कोरोनाको पहिलो लहरमा नेपालमा खासै बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमण बढी
We would like to inform , we have started Blood Gas Analyzer service at our hospital for better patient care. Blood Gas Analyzer :-An arterial
डा. मो. फिरोज अंजुम सामान्यतया धेरैले मिर्गौला रोग बुढेसकालमा अर्थात उमेर अलि बढी भइसकेपछि लाग्ने रोग हो भनेर बुझ्ने गर्छन्। तर मिर्गौलाको रोग जोकोहीलाई र
इसान बाल अस्पतालकाे सफलता : आधुनिक मेसिनद्धारा बालकको पेटमा रहेको अन्डकोषको सफल शल्यक्रिया
काठमाडौं, चैत ४ ईशान बाल अस्पतालले ४ वर्षीया बालकको अन्डकोषको सफल शल्यक्रिया गरेको छ। दाहिने अण्डकोष पेटमा रहेकोमा अस्पतालले ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरीको माध्यमबाट अप्रेशन गरेको अस्पतालले
पछिल्लो समय धेरै दम्पतीहमा नि:सन्तान हुने समस्या छ । के कारणले यस्तो हुन्छ ? नि:सन्तान दम्पतीको लागि आइभिएफ किन उपयोगी छ ? आइभिएफ किन सबै